I-Twin River Cottages - I-Airbnb
I-Twin River Cottages
Izindlu zaseTwin River zibonelela ngendawo yokuhlala esemgangathweni kwifama esebenzayo imizuzu nje emihlanu ukusuka kwidolophu yaseGore, kumbindi weSouthland. IGore yidolophu esemaphandleni elunxwemeni loMlambo iMataura odumileyo, owaziwa njengekomkhulu lehlabathi lokuloba iitrout ezimdaka. Amacandelo amabini anokulotywa oMlambo iMataura aqukuqela kule ndawo. IGore inabemi abamalunga nama-7,500. Indawo entle ekusekwe kuyo ngelixa uphonononga yonke into eyenziwa yiSouthland.
Indlu yethu entsha yendlu isekelwe kwinto esithanda ukuhlala kuyo kuhambo lwethu. Iphangalele kwaye ibucala kwaye inika iindwendwe ukuzimela ukuba ziwise iibhegi zazo emnyango, zithathe iintonga zokuloba kwaye zibhadule ukuya kwelinye lamacandelo amabini anokulotywa kwipropathi ukuze bazame ithamsanqa labo. Okanye, unokuphumla ngokulula. Siyathemba ukuba wonke umntu uyakuyonwabela indawo ezisemaphandleni kunye nomgangatho wokufakwa kunye nokulungiswa esikubandakanyileyo.
Indlu yethu yimizuzu emi-5 ukusuka eGore eqhayisa ngeekhefi, iindawo zokutyela, iholo yemiboniso bhanyabhanya, iivenkile ezintle, iigadi zikawonke-wonke ezintle, iziko lasemanzini kunye ne-ice rink, iHokonui Moonshine Museum, iGalari yaseMazantsi eMpuma (enengqokelela ezaziwayo) kunye kufutshane nohambo lwasendle. kunye neengoma zebhayisekile.
Siyavuya kakhulu ukunika isikhokelo malunga neendawo zokundwendwela kwaye sinokunceda ngokulungiselela ukhenketho lwasefama kunye nezikhokelo zokuloba ukuba kukho imfuneko.